ရုရှားတွင်ဟယ်လိုဝင်း၏အားလပ်ရက်လိုအပ်သို့မဟုတ်မဟုတ်လော အဘယ်ကြောင့်နည်း | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဘာအားလပ်ရက် Helouin?! သူဘာကိုကိုယ်စားပြုသလဲ သူကလူတွေကိုဆောင်တတ်၏ဘာလဲ?
ဒါဟာအသေကောင်သူပုန်များအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, မကောင်းသောအတပ်ဖွဲ့များစီစဉ်ဥပုသ်? ဒါဟာဘာလဲ?!
ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ဒါဒါအချို့နေဆဲသူတို့ရဲ့အားလပ်ရက်စီစဉ်, ဤဆိုးသောအင်အားစုနှင့်အတူပရောပ ... ကိုမဆိုတို့၏အညစ်အကြေး, မှားသော, ရက်စက်မှုချို့တဲ့။ ဒါဟာအလွန်အလေးအနက်ထားအားလုံးပါပဲ။ ဒါဟာမကောင်းသောအဘဝမှာဝိညာဉ်များနှင့်အခြားသူများ၏ဘဝမှော်နှင့် invocation ၏ချောက်ကမ်းပါးပေါ်သည်။
ဟယ်လို, သင်တန်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလပ်ရက်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုနောက်မှငါသည်အသက်ကြီးမျိုးဆက်အစည်းအဝေးရုရှားနိုင်ငံသည်၎င်း၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းနှင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပိုပိုပြီးကျယ်ပြန့်သိရကြ၏။ ငါ့ကိုဤနေ့, အဲဒါကိုလက်ရှိရှိပါတယ်ကြောင်းကိုအခြေအနေတွင်ဖြစ်ပါသည်, ငါမကြိုက်ဘူး။
ဒါပေမယ့်ငါတို့ထင်တာကငါတို့တွေကရုရှားလူမျိုးတွေဟာဟယ်လိုဝိန်းပွဲကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်နဲ့မဆက်စပ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ငါတို့တစ်ခုတည်းသောအခွင့်အရေးမှာအတူတကွစုရုံးခြင်း၊ ထိတ်လန့်ဖွယ်ဝတ်စုံများကို ၀ တ်ဆင်ခြင်း၊ မျက်နှာဖုံးများ ၀ တ်ခြင်း၊ ဖယောင်းတိုင်သို့မဟုတ်မီးပုံမီးခိုးများဖြင့်ခုန်ခြင်း၊ ဖရုံသီးမှ scarecrow ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ လူအများစုကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကိုးကား၊ - သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူပျော်ရွှင်ရန်ပျော်စရာကောင်းသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခု။ ဒါဟာရုံ masquerade တူတစ်ခုခုပါပဲ။
ကြှနျတေျာ့အမွငျတှငျ, ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာအလားတူနှစ်စဉ်ပွဲခံခြင်း, အမည်ရ, အိုင်ဗင် Kupala နေ့စရာရှိသောကြောင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအတွက်မပါနိုင်ငံခြားဟယ်လိုဝင်း, မလိုအပ်ပါဘူးလက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်။ ၏သင်တန်းကအယူမှားအားလပ်ရက်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သူကနားမလည်နိုင်ငံခြားဟယ်လိုထက်အများကြီးရုရှားကလူအများကြီးပိုနီးစပ်သည်။
ငါကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများကပေါ်စာရင်းဇယားကိုသိပေမယ့်အားလပ်ရက်အလွန်ကောင်းစွာကျင်းပသည်အဘယ်မှာရှိပြည်နယ်များ, အတွက်အာဏာပိုင်များနှင့်မိဘများအပေါငျးတို့သအားထုတ်မှုများ၏ကြားမှနှစ်စဉ်သားသမီးများ၏အတော်လေးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါဘူး။ နည်းဥပဒေအောက်ပါချစ်သားတို့ညဥ့်မှာလမ်းများလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောသူတို့ကိုရန်မကြာခဏအတော်လေးလူသိများ၏တံခါးပေါ်တွင်ခေါက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အတော်လေးထိုကဲ့သို့သောအားလပ်ရက် (pedophiles) လုံးဝမည်သူမဆိုမလိုအပ်ပါဘူးကြောင်း ubezhdn ။ အထူးသဖြင့်ရုရှား။ သူတို့ရဲ့ undeservedly မေ့လျော့ပေမယ့်ပျော်စရာ, အားလပ်ရက်များနှင့်အစဉ်အလာများအပြည့်အဝ။
ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ် အကယ်. ပွဲတော်ကိုဘဲ, ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာမဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုမီးရှို့သောဗလာရုပ်အောက်မှာဖုံးကျနော်တို့နတ်ဆိုးတပ်ဖွဲ့များ (ဥပမာ Shrovetide ကျပ်), မြစ်ထဲသို့ချပစ်, ဟယ်လိုမကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုး၌ပဋိညာဉ်ဖွဲ့တူသောနေစဉ်။ အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ယုံလူတွေလိုအပျသလဲ ကျနော်တို့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့နှင့်စောငျ့ရှောကျဖို့လိုအပျသောငါတို့ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ရက်များနှင့်အစဉ်အလာရှိသည်, ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ထံမှလေ့လာသင်ယူကြပါဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, မဤမျှလောက်ဒီဟယ်လိုပြောပါ, အနည်းဆုံး, ကပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်အထူးတစ်ခုခုလိုချင်ပါတယ်တဲ့သူထိုသို့သောတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါဟာမဟုတ်ဘဲဒါသိသာမဟုတ်သောခေါင်းစဉ်တက်မှုတ်ဖို့သတင်းစာပညာကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။
Helluin သို့မဟုတ် Valentine Day ကိုကိုမဖျက်သောအဘို့ nuzhny.Oni ရုရှားမဟုတ်ပါဘူး။
ငါတို့မိသားစု, အယူမှား, - Shrovetide, ရန်ကီးရေချိုးပေးပါ။
Posted in, အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှု
61 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,285 စက္ကန့်ကျော် Generate ။